Izindaba - I-Aluminium Extrusion Ifa FAQs
Ake siqale ngesingeniso esifushane sezinzuzo ze-aluminium extrusion.
I-Aluminium ingu-1/3rd ukuminyana kwensimbi, okwenza i-aluminiyamu ibe yisinqumo esihle kakhulu ezinhlelweni zokusebenza eziningi ezihlobene nokunyakaza.Inzuzo yengxenye ye-aluminium extruded ukuthi ibeka into kuphela lapho idingeka khona, okungenzeka yehlise isisindo nezindleko.
I-Aluminium inesilinganiso esiphezulu samandla nesisindo kunezinye izinto eziningi.Isibonelo, i-aluminium yebanga le-6061-T6 icishe iphindwe kane amandla ensimbi engagqwali engu-304;okwenza i-aluminium extruded ibe ukukhetha okuhle ezinhlelweni ezithwala umthwalo, lapho ukunciphisa isisindo kubalulekile.
Uma i-Iron oxidizes izogqwala futhi ihlakazeke, kodwa uma i-aluminiyamu i-oxidize yenza ifilimu evikelayo ngaphezulu.Lokho kungonga ezindlekweni zezinqubo zokumboza futhi kuqede ukulungiswa lapho singekho isidingo sokuqeda okuhle kakhulu.
Amabanga amaningi omshini we-aluminium kalula.Ungakwazi ukusika i-aluminium extrusion ibe ubude nge-hacksaw bese ubhoboza izimbobo nge-drill yakho engenantambo.Ukusebenzisa ama-aluminium extrusions ngaphezu kwezinye izinto kungasindisa ukuguga nokuguga emishinini yakho namathuluzi.
Izinketho zokuqeda eziningi
I-aluminium enwetshiwe ingapendwa, ipuletiwe, ipholishwe, ithungwe futhi ifakwe i-anodized.Lokhu kukunikeza inqwaba yezinketho ongakhetha kuzo kunalokho okungenzeka ngezinye izinto.
Kunevelu yemakethe ye-aluminium esele.Lokho kusho ukuthi uma umkhiqizo wakho ufika ekupheleni komjikelezo wokuphila azikho izinkinga ngokulahla izinto ezingadingeki.
Uma abaklami becabanga ngokusebenzisa i-aluminium extruded, ngokuvamile bazozikhawulela kumamo atholakala kumakhathalogi emikhiqizo evamile.Lokho kungaba yithuba eliphuthelwe lokuthuthukisa idizayini, ngoba amathuluzi e-extrusion ngokwezifiso ashibhile ngokumangalisayo.
Umbuzo: Ziyini izindleko zokufa?
A: Azikho izindleko ezibekiwe zokufa.Ngokusekelwe ekwenziweni ngokwezifiso okuhlanganisa usayizi, umumo nokuqeda, sizonikeza inani elifanelekile.
Q: Iyini impilo ye-extrusion die?/ I-extrusion ifa isikhathi esingakanani?
IMP: Siklama ama-dies ukuze silawule ukushisa nengcindezi engalingani, eyenza ijubane le-extrusion ihambe kancane futhi andise ubude bempilo bokufa.Ekugcineni, ukufa kuzodinga ukushintshwa, kodwa sithatha izindleko zokushintshwa kokufa.
Q: Ungakwazi yini ukusebenzisa ama-dies akhona kwamanye ama-extrusions ephrofayili?
IMP: Ngokuya ngesicelo sakho esithile, sinikeza ukufa okujwayelekile.Uma sinokudayi okujwayelekile okufanelana nesidingo sakho, sizokuthumelela ukuphrinta kwephrofayela ukuze ukubuyekeze.Uma lusebenzela uhlelo lwakho lokusebenza, sizobe sesikwenzela lona.
Ukuthenga noku-oda ama-FAQ
Q: Ungakwazi yini ukusika ama-extrusions abe ngobude obucacisiwe ngaphambi kokuwathumela?
IMPENDULO: Sisebenzisa izinqubo namasu anhlobonhlobo ukuze simise ama-extrusions e-aluminium athile ngendlela yokusika, ukugoba, ukuyisusa, ukushisela, ukukhanda imishini nokubumba ukuze sihlanganise umkhiqizo wakho wokugcina.
A: Ngokuvamile, inani elincane le-oda ngaphandle kwezindleko zokusetha amaphawundi ayi-1,000 ngokuqedwa kwegayo ngalinye.
Q: Yiziphi izinketho zokupakisha ozinikezayo?
IMP: Sisebenzisa izinhlobonhlobo zokupakishwa ezijwayelekile nezingokwezifiso ukuthumela i-oda lakho nganoma iyiphi indlela ofuna ngayo, ukusuka kunqwaba engenalutho ukuya kumakhreyithi avaleleke ngokuphelele, avikelekile.